Torohevitra fanatsarana mailaka 5 hampitomboana hanokatra sy tsindry | Martech Zone
Tsy ho lasa tsotra kokoa noho ity infographic avy amin'ny ContentLEAD ity. Ny prospect dia tototry ny mailaka noho ny vidiny ambany isam-bolana sy tahan'ny fiovam-po. Saingy miteraka olana goavana izany… very ny mailakao ao anaty boaty afovoany amin'ireo hafatra an-jatony na an'arivony maro hafa.
Inona no azonao atao hanavahana ny fifandraisana amin'ny mailakao amin'ny vahoaka? Ireto misy singa 5 ao anatin'ny anatomy ny hafatra mailaka miaraka amin'ny fiantraikan'ny fanatsarana:
Andalana foto-kevitra fohy afaka mitondra any 20% ny taha ambony misokatra salanisa.
Fiarahabana manokana afaka mitondra any 129% ny taha ambony amin'ny click-through.
Kabary tsy miankina amin'ny orinasa afaka mitondra any Tsindry 24% fanampiny.
Manampia sary ho an'ny 82% nampitombo ny fifantohana.
Segmented hafatra sy mpihaino no mitarika mankany Tsindry 50% fanampiny.
Satria mahomby tokoa ny fampielezan-kevitra amin'ny mailaka, saika ny marika rehetra no mampiasa azy ireo. Ny boatin-tsarimihetsika Prospect dia tototry ny mailaka avy amin'ny orinasa ary ny mpanjifanao dia mila mandahatra ireo hafatra sarobidy avy amin'ny spam. Ity infographic ity dia manome anao maso vetivety ny anatomy amin'ny hafatra mailaka mahomby mba hahafahanao mitondra ny fomba fanao mahomby indrindra amin'ny atiny zarainao amin'ny mpihaino anao. ContentLEAD
Tags: miteny orinasamailaka tsindrio hatramin'ny alàlan'ny mailakamailaka click-thrutsindrio mailakasary mailakamailaka misokatramisokatra ny mailakafanatsarana ny mailakafizarana mailakatsipika momba ny mailakamiteny olonafiarahabana manokana
Fanatsarana 10 azonao ampiharina amin'ny marketing ara-tsosialy ankehitriny!